December 2017 – ရွှေလရောင်
💘 မိန်းက​လေး​တွေ သူတို့ချစ်သူဆီက လိုချင်​တဲ့ အချက်​ (၁၀) ချက် 💘
မန္တ​လေး ချမ်းမြသာစည်​မြို့နယ်​ရှိ ကျူးကျော်များကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်း
ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံမီးလောင်နေလို့ တချို့က မိုးရွာရင်ကောင်းမယ်လို့ဆုတောင်းနေကြတယ် လုံးဝ လုံးဝမတောင့်တလိုက်ပါနဲ
” နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့် ယွန်းဝတီလွင်မိုး “
slyadmin December 31, 2017
” နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့် ယွန်းဝတီလွင်မိုး ” နာမည်ကျော်မင်းသားကြီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ လွင်မိုးတစ်ယောက် ယောက္ခထီးရာထူးကို ရရှိ သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သမီးနှစ်ယောက်ရှိရာမှာ သမီးအကြီးဖြစ်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး ကတော့ စွံသွားပြီပဲဖြစ်ပါ တယ်။ သူမဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပက်သက်လို့ Photo Model ပိုင်းလောက်ပိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီး သရုပ်ဆောင်ပိုင်းထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သွားဖို့ကိုတော့ ဝါသနာ အရမ်းမထုံဘူးလို့…
ဆောင်းတွင်း အရေပြားယားယံခြင်းကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်များ
ဆောင်းတွင်း အရေပြားယားယံခြင်းကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်များ ဆောင်းတွင်းဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ အသားအရေတွေ ခြောက်သွေ့ကာ အရေပြားယားယံမှုကို လူတော်တေ်ာများများ ခံစားရလေ့ရှိပါတယ် ။ ယားယံခြင်းကြောင့် လက်ဖြင့်ကုတ်တဲ့အခါ လက်သည်းပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်လည်း တော်ရုံနှင့် မပျောက်နိုင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။ ဒီလို ယားယံတဲ့အခါ အတတ်နိုင်ဆုံး လက်ဖြင့် မကုတ်မိအောင် ထိန်းဖို့ လိုပါတယ်…
နတ်ဒေဝါ နှင့် ဝိဇ္ဇာ အပေါင်း တို့ စောင့်ရှောက်မှုကို ခံယူရရှိနိုင်သော ပုတီးစိပ်နည်း ..!
နတ်ဒေဝါ နှင့် ဝိဇ္ဇာ အပေါင်း တို့ စောင့်ရှောက်မှုကို ခံယူရရှိနိုင်သော ပုတီးစိပ်နည်း ..! ဤပုတီးစိပ်နည်း သည် တွေ့ရခဲ သော ပုတီး စိပ်နည်းဖြစ်သည် ။ ပြု့ ကျင့် ရန်လည်း လွယ်ကူ သည်။ နေ့စဉ် အာစိဏ္ဏကံ ပြု့ ၍…
နှလုံး ခုန်နှုန်း ချက်ချင်းမြန်သွားရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်းများ
နှလုံး ခုန်နှုန်း ချက်ချင်းမြန်သွားရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်းများ နှလုံး ခုန်နှုန်းချက်ခြင်းမြန်သွားပြီး ကိုယ့်နှလုံးခုန်နှုန်းက ၁ မိနစ် ၁၀၀ ကြိမ်ထက် တက်သွားရင် အသက်ရှူတွေ ကျပ်လာမယ်၊ မောလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကျရင် စိတ်ကို အေးအေးထားပြီး ဆရာဝန်ကို ခေါ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကိုယ့် မိဘ ဆွေမျိုးတို့ကို…
ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ဖြစ်နေတဲ့ RS ကြီးကို ပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် 💘
ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ဖြစ်နေတဲ့ RS ကြီးကို ပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် 💘 ” ကျွန်တော်တို့ ရည်းစားတွေဖြစ်တာ တစ်နှစ်ခွဲလောက် ရှိနေပြီ အကို” ” မင်းဟာက အစမရှိ အဆုံးမရှိ ဘာကြီးတုန်း ” ” ဟုတ်တယ်အကို .. အဆုံးလဲ မရှိဘူး အစလည်း မရှိဘူး ..…
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အတွက်​ ၂၀၁၈ တစ်​နှစ်​စာ ဟောစာတမ်းနှင့်​ အ​ဆောင်​ယတြာများ
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အတွက်​ ၂၀၁၈ တစ်​နှစ်​စာ ဟောစာတမ်းနှင့်​ အ​ဆောင်​ယတြာများ ယခုနှစ်တွင် ရှေ့ပိုင်း(၇)လတွင်လုပ်ငန်းခွင်တွင်အကြံအစည်းအသစ်များ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အလုပ်အကိုင် အကြံအစည်းများ မှတ်ကောင်းနေပါမည်။စနစ်တကျလုပ်ပါ။ ဒီဇာတာရှင် တကယ်လုပ်မည်ဆိုလျှင် အများကသိပ်အံ့သြသွားကြလိမ့်မည်။ထူးခြားခြား ထင်ပေါ် လာမည်။ မိတ်ကောင်း၊ဆွေကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြိး လုပ်ငန်းခွင်များ အောင်မြင်မည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားသွားလာခြင်း၊ရပ်ဝေးမိတ်ဆွေများနှင့် အစုရှယ်ယာဝင်လုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊အလုပ်အသစ်များ စတင်ထူထောင်ခြင်းများအကျိုးပေးမည်။ ကြသပတေး၊တနင်္လာ၊နေနံ🗼🗽နိုင်ငံများ(မလေး၊ဂျပန်၊ကိုရီးယာ) အလုပ်အကိုင်…
ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များအား ခွထိုင်ခြင်း လည်ပင်းဖက်ခြင်း မဖွယ်မရာ ဓါတ်ပုံများရိုက်၍ facebook တင်သူများအား စိစစ်အရေးယူ
ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များအား ခွထိုင်ခြင်း လည်ပင်းဖက်ခြင်း မဖွယ်မရာ ဓါတ်ပုံများရိုက်၍ facebook တင်သူများအား စိစစ်အရေးယူ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ရွှေမိုးတောင်ပေါ်၌ တည်ထားကိုးကွယ်လျက်ရှိသော ရဟန္တာတစ်ထောင် ရှင်ပင်မြတ်စွာဘုရား ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်ကြီး ဌာပနာပိတ်ပွဲနှင့် ထီးတော် တင်ပွဲပြုလုပ်ရန် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့၌ပြင်ဆင်နေစဉ် မုန်ဒန်အောင်၊(၁၈)နှစ် နှင့် ဂွမ်ဆန်အောင်၊ (၁၈)နှစ်တို့…
ဇလုံတောင်တော်ကို ရွှေရောင်လွှမ်းတာ တကယ်လားလို့မေးရင် တကယ်ပါ
ဇလုံတောင်တော်ကို ရွှေရောင်လွှမ်းတာ တကယ်လားလို့မေးရင် တကယ်ပါ ဇလုံတောင်တော်ကို ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ပုံလေး တင်လိုက်တော့ အားလုံးက မေးကြတယ်။ တကယ်ရွှေရောင်လားတဲ့၊ဇလုံတောင်ကို ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ အချိန်က နေ့တိုင်းမလွှမ်းပါဘူး။ လွှမ်းတဲ့နေ့ဆိုလည်း ညနေ 5:00ကနေ 5:10မိနစ်လောက်အထိပါပဲတဲ့။ဒီနေ့တော့ 5:20 လောက်အထိ ရွှေရောင်လွှမ်းတုန်းပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ကံထူးလို့ ဖူးခွင့်ရတာပါ။ကျွန်တော်က ဒီတကြိမ်နဲ့ဆို လေးကြိမ်ရှိပါပြီ။အခု…
ငါးအရိုးမျက်ခြင်းအတွက် ဆေးမြီးတိုနည်းများ ငါးအရိုးမျက်လျှင် အတော်ကို ခံစားရခက်သည်မှာ အားလုံးလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခါတရံ ခဏလေးနဲ့ ပျောက်သွားပေမယ့် အခန့်မသင့်လျှင် ဆေးရုံတက်ပြီး လည်ချောင်းကနေ ခွဲထုတ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ငါးအရိုးမျက်လျှင် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် အိမ်တွင်းကုထုံးလေးများကို ရသမျှစုစည်း၍ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေရာနည်းကို ပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ (၁) သံပုရာသီးကို…
“စိတ်ထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်နေတဲ့အခါ” မနက်ဖန်ဆိုတာကို ခဏမေ့လိုက်ပါ။ သုံးစားလို့မရတဲ့ မနေ့ကအကြောင်းအရာတွေကို မတွေးပါနဲ့။ သင့်ခြေတွေလက်တွေပြန်စမ်းကြည့်ပါ။ အကောင်းအတိုင်းရှိနေပြီဆိုရင်……… သင်ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ……… အချစ်ရေးလား???? တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာ မီးပါ။ ငြိမ်းလိုက်ရင်ငြိမ်းသွားပြီး မွေးထားရင်တော့ ဆက်လောင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ… အသဲတစ်ခါကွဲဖူးရင် အချစ်ကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲသိသွားပါပြီ။ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်တောင်မယုံရတဲ့ခေတ်မှာ သင်ကဘယ်သူ့ကိုတောင်ယုံကြည် နေချင်သေးတာလဲ။…
လက်​ရှိ မနက်​ ၅နာရီခွဲ အ​ခြေအ​နေ နဲ့ တစ်​ညလုံး ဆက်​တိုက်​ဆိုသလို ​အောက်​ဆီဂျင်​ ပြတ်​လပ်​ ​နေကြ​သော မီးသတ်​သူရဲ​ကောင်းများ